ဘယ်သူပြိုင်လို့ပျင်းပါတော့ အနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဘယ်သူပြိုင်လို့ပျင်းပါတော့ အနိုင်	14
ဘယ်သူပြိုင်လို့ပျင်းပါတော့ အနိုင်
ဒီမနက် အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်း မျက်လုံးဖွင့် ကြည့် လိုက်တော့၈နာရီကွက်တိ။ စိတ်ထဲ အတော်ကျေနပ်သွားတယ်။ ခါတိုင်းနေ့ တွေထက် နာရီဝက် တစ်နာရီပိုစောနိုးနိုင်လို့ ။ ကွက်တိနိုးပေမပေါ့ဖုန်းနာရီကို alarm ပေးထားသကိုး။ တတီတီမြည်နေတဲ့ဖုန်းalarmကိုပိတ်ပြီး ဟိုတစ်လောက အင်တာနက်လေလိုင်းကနေတဆင့်ဖုန်းမန်မိုရီထဲရောက်လာတဲ့ဆံပင်ဖို့ ရိုးဖားယား အမည်မှန်မသိရတဲ့နတ်မိမယ်လေးတစ်ပါးကို goodmorning အာဘွား တစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး တဖက်ကိုစောင်းလှဲ့ မှောက်လဲအိပ်လိုက်ရင်း ဒီကနေ့လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကို စဉ်းစားနေကြည့် လိုက်တယ်။
ပထမဦးဆုံး အိပ်ယာကထမယ်။ ( ဒီအလုပ်က ဒီကနေ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာ အခက်ခဲဆုံးနဲ့အပင်ပန်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့် မယ်။ ) အိပ်ယာကထပြီးတာနဲ့ခြေရင်းက ဆပ်ပြာခွက်ကိုယူမယ်။ စခန်းအနောက်က စမ်းချောင်းဆီကို သွားမယ်။ မျက်နှာသစ်မယ်။ သွားတိုက်မယ်။ ရေတော့ မချိုးသေးဘူး။ စမ်းချောင်းကပြန်တက်လာပြီး မီးဖိုချောင်းကို ဝင်မယ်။ gasမီးဖိုကို ဖွင့် မယ်။ ရေတစ်ခွက်စာကွက်တိချိန်ထည့် ပြီး ရေနွေးတည်ထားလိုက်မယ်။ ဒါက ကော်ဖီဖျော်သောက်ဖို့ ။ ပြီး ဆပ်ပြာခွက်ကို အိပ်ယာခြေရင်းမှာပြန်ထားမယ်။ ကော်ဖီမစ် တစ်ထုတ်ယူပြီး မီးဖိုချောင်ကိုပြန်သွားမယ်။ အသင့် ဆူနေတဲ့ရေနွေးနဲ့ကော်ဖီမစ်ကိုဖျော်လိုက်မယ်။ ကော်ဖီခွက်ကိုယူပြီး ထမင်းစား စားပွဲရှည်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ကော်ဖီသောက်နေရင်း ဒီကနေ့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို တွေးကြည့် မယ်။
အရင်ရက်တွေက ရာသီဥတုကောင်းနေပြီ့း တောက်လျှောက် သစ်တွေတိုက်ထုတ်နေရတော့workshopဖက်ကို ပြန်မကြည့် နိုင်တာမို့workshopထဲမှာက အလုပ်တွေက တပုံတပင်ကြီးစောင့် နေလေရဲ့ ။
ပထမဦးဆုံး workshopထဲထိုးထားတဲ့hilux ၂စီးကို အရင်ရှင်းထုတ်မယ်။ ပထမတစ်စီး Timing Beltပြတ်သွားလို့ဗားကောက်သွားတဲ့ တစ်စီး။ ဟက် ပြန်တင်မယ်။ Timing ချိန်မယ်။ ပြီးရင် နောက်တစ်စီး gearbox (crown)ကွဲတာ ပြန်fixပြီး crown ပြန်တင်မယ်။ ဒီ ၂ စီး ပြီးရင် ကားတွေကိုအပြင်ထုတ်လိုက်မယ်။ ဘူဒိုဇာချိန်းပြားတွေကို welding ဆော်မယ်။ ပြီးရင် Loader တစ်စီး workshop ထဲသွင်းမယ်။ water pump ဖြုတ်အသစ်လဲမယ်။ နောက် အရင်ရက်တွေက ပေါက်ထားတဲ့ကားတာယာ ၃လုံးပြန်လုံးမယ်။
၁ရက် ၂ရက်ထဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြီးမြောက်နိုင်မယ့်လုပ်စရာ အလုပ် တပုံတပင်ကြီးတွေကို တသီတတန်း တွေးရင်း..
တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ပြန်လည်အိပ်မောကျသွားပါတော့ တယ်။ ———————————
တောတွင်းပျော်တစ်ယောက် အိပ်ပျော်သွားတော့် အလွန်တရာမှ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်အေးဆေးလှတဲ့လူသား ၁ယောက်စ ၂ယောက်စသာမြင်တွေ့ ရတဲ့ဂဇက်ရွာထဲကိုရောက်သွားပါရောလေ။
ရွာ့ အပြင်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့် လိုက်တော့မိတ်ဆွေရွာသားတစ်ချို့ လှမ်းမြင်မိလိုက်ပါရဲ့ ။
တောတွင်းပျော်ရဲ့မိတ်ဆွေရွာသားတွေ သားရေး သမီးရေး
သမီးရည်းစားအရေး စတာတွေနဲ့ 
လုံးချုာလည်လိုက် ပြေးလွှားလှုပ်ရှားရင်း ရွာထဲကိုတောင် မဝင်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေကြတာတွေ့ ရတော့ 
ကျွတ်… ကျွတ်… ကျွတ်… ကျွတ်…
သူတို့ နဲ့ မတူ တမူခြားစွာ တောင်ထိပ်ပေါ် လိုင်းမကောင်းလို့rရွာထဲမဝင်နိုင်တာပါလို့အကြောင်းပြပြီး တော်တွင်းပျော်တစ်ယောက်ကတော့ခြေကားရား လက်ကားရား အပူအပန်ကင်းမဲ့ စွာ အိပ်ပျော်နေလေရဲ့ ။
လိုင်းကောင်းမကောင်း ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ နော်။
အချိန်မတိကျတတ်တဲ့ သူဆို အရမ်းစိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကို
တားတားဖြင့်အရမ်းမုန်းတာပဲ မေမေရယ် အဟင့် !
ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးနေတဲ့ 
kai says: ပြောသာပြောတာ.. ယူအက်စ်က ဘီလီယံနာတွေများ.. အဲလိုတောထဲ.. သွားနေ.. အမဲလိုက်ရဖို့..ဒေါ်လာသန်းချီသုံးရတာ..။
အာဖရိကက.. တချို့နိုင်ငံတွေ.. အဲလို သဘာဝအတိုင်းအမဲလိုက်ထွက်နိုင်..တောထဲနေနိုင်တဲ့အစီအစဉ်စီစဉ်ပေးပြီး.. တိုးရစ်ဇင်လုပ်စားကြတယ်..။
တောတွင်းပျော် says: သဂျီးတို့ US က ဘီလျံနာတွေ ဒီလိုမျိုးမှာ သန်းချီ သုံးရသတဲ့ လား
naywoon ni says: သူဂျီးက​တော့ ပိုက်​ဆန်​ရဖို့ ထိုင်​​တွေး​နေတာပဲ လက်​​တွေ့မှာ အလုပ်​မဖြစ်​တာခက်​လှတယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: အဲဒါ
သူပြော ပြောနေတဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာ
ဦးကြောင်ကြီး says: တောတွင်းပျော်ဘောကွင်းမျှော် ဒေါတင်းအော်ကျောခင်းစော်
တောတွင်းပျော် says: စာစီစာကုံးရေးတာမှားသွားတယ်။
ရွာထဲတွင် လူတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စနဲ့အမြီးတယမ်းယမ်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ မတော့ ဘာ အရေးး ရှိရှိ ဒီ ထဲ
တောတွင်းပျော် says: အိမ်ရှင်ထက် ဧည့် ဝတ်ပိုကြေတဲ့မမချွိပါအော့ 
Mike says: .လူသား ၁ယောက်စ ၂ယောက်စသာမြင်တွေ့ ရတဲ့အထဲကျုပ်တော့ပါတယ်မဟုတ်လားဗျ .ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်…သဂျီးပြောသလို ခင်ဗျားကံကောင်းသဗျ
.မြန်တျန့်မှာတော့ တောမရှိတော့ဘူး
တောတွင်းပျော် says: လူပျင်းတွေက ကံကောင်းတတ်သနော်။ ကိုမိုက်
Ma Ei says: ပျင်းရင် တောထဲကအကြောင်းလေးတွေ တစ်ကယ်ဖြစ်ရပ် အဆန်းတစ်ကြယ်လေးတွေ ပျော်စရာလေးတွေ ရေးတင်ပါဟယ်……..
ရွာထဲ လျှောက်လို့ ပျင်းရင် လာဖတ်မလို့ပါ…
တောတွင်းပျော် says: အာ့ မလေး!
ပျင်းတဲ့ သူ အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ 
ပျင်းတဲ့ သူကိုမှ အပျင်းပြေရေးခိုင်းတယ်လို့ ။
ရေးဖို့ တွေတော့ ရှိပါတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: အနော်တောင် ရွာထဲ ရောက်နိုင်ခဲသွားလိုက်တာမှ
တောတွင်းပျော် says: အနော်တောင်ရဲ့အမြည်းစုံတဲ့ပုလင်းခုံလည်း လုပ်အုံးလကွာ။